Mijanona eo Maynooth tsara tarehy any avaratry County Kildare, tadiavo ny oniversite Maynooth tsara tarehy naorina tamin'ny taonjato faha-18 ary mandehandeha mamaky ny campus mahavariana. Mihaona amin'ireo biby mahafinaritra eo amin'ny fianakavian'i Clonfert Pet Farm, na alaivo eo akaikin'ny Castletown House eo akaiky eo ary talanjona amin'ny firafitr'ity manankarena firenena Palladian manaitra ity.
Maynooth no hany oniversite ao Irlandy ary ivon'ny fampianarana sy ny fikarohana. Io dia nosoratan'i Maynooth Castle tao amin'ny faran'ny tanàna iray, ary ny tranon'ny Carton tamin'ny taonjato faha-17 - ny seza taloha an'ny Dukes of Leinster. Ny tanàna ankehitriny dia tanàna mpandehandeha sy mpianatra mavitrika miaraka amina fitsangantsanganana, kafe, fisakafoanana ary zavatra hafa tokony hatao.
Maynooth dia toerana fijanonana lehibe teo amin'ny Royal Canal ho an'ny sambo alohan'ny nanamboarana ny lalamby tamin'ny 1847. Ny Royal Canal Greenway, 130km ny lalan-tongotra sy ny lalan'ny bisikileta dia azo aleha avy any Maynooth ary io no fomba tonga lafatra mankany Kilcock, lakandrano tanàna sisiny ary avy eo mandroso mankany amin'ny tanànan'ny Moyvalley mbola tsy simba.
Zavakanto & Kolontsaina Adventure sy hetsika Lova sy tantara Outdoors fiantsenana Kildare mpitaingin-tsoavaly
Pubs & Nightlife trano fisakafoanana trano fisotroana kafe mpamokatra
zavatra ilaina Hotels Bed & Breakfast Lakozia kely Camping Kildare
Cl Farm Fiompiana Pet
Andro iray feno fahafinaretana mahafinaritra ho an'ny fianakaviana misy karazana hetsika isan-karazany, anisan'izany ny fitsangatsanganana an-tsokosoko sy ny fialamboly amin'ny fambolena.
Sakafo mahasoa be dia be miaraka amina fihodinana tokana manambady miaraka amina fanompoana manokana sy mafana.
Efitra dite Victoria
Sakafo sy mofomamy manara-penitra ao amin'ny toerana tokana misy trano fiompiana vato tamin'ny taonjato faha-18.